Ikhaya elipholileyo elifihliweyo kwiLizwe laseFransi
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguNadine
UNadine ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-Bavincourt yilali ezolileyo, iikhilomitha ezili-16 emazantsi e-Arras kwaye kumgama omfutshane weendawo zokulwa ze-WW1, i-Commonwealth War Graves. Iindwendwe zikonwabela ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela amahashe, ukubukela iintaka, okanye ukuphumla nje egadini yethu.
Umgangatho ophezulu wendlu yethu ubekelwe iindwendwe zethu. Inamagumbi amabini okulala (ngalinye lineshawari yalo yabucala kunye nendlu yangasese). Igumbi lokuqala (igumbi laseGingko) linebhedi enkulukazi, kunye nebhedi eyongezelelweyo yamawele). Ingalala ukuya kutsho kubantu aba-3. Igumbi lesibini (igumbi laseTilleul) lineebhedi ezimbini ezingamawele kwaye zinokulala abantu aba-2. Igumbi linokufikelela kwi-intanethi. Sibonelela ngeebhedi, iitawuli, kunye neti kunye nezixhobo zokwenza ikofu.
Ngesicelo, iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwiindawo zokuhlamba kunye nokomisa, izixhobo zoku-ayina. Ibhedi yomntwana nayo inokubonelelwa simahla.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwindawo ekhuselekileyo yokupaka kwindawo yethu.
Isidlo sakusasa selizwekazi sibandakanyiwe negumbi.
Isidlo sangokuhlwa esiphekwe kwikhaya lamaFrentshi sinokubhukishwa kwangethuba (ii-Euro ezili-15 ngewayini yabantu abadala iqukiwe kunye nesidlo).
Siyakunandipha ukwabelana ngendlu nesitiya sethu kunye neendwendwe zethu. Siya kukuvuyela ukukwazisa malunga neendawo ezininzi zembali kunye nabakhenkethi (iindawo zeemfazwe zeMfazwe yeHlabathi yoku-1, amangcwaba omkhosi, izikhumbuzo ezihlelwe kwi-patrimony yobuntu yi-UNESCO ...)
Siyakunandipha ukwabelana ngendlu nesitiya sethu kunye neendwendwe zethu. Siya kukuvuyela ukukwazisa malunga neendawo ezininzi zembali kunye nabakhenkethi (iindawo zeemfazwe zeMfaz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bavincourt